China Pump irabha ngaphambili nqanawa Wear Izahlulo mveliso kunye nabathengisi | YAAO
Xa ukumpompa islurries esirhabaxa ayingombuzo wokuba uya kudinga indawo yokupompa islryry kunye nokunxiba iinxalenye- ngumbuzo wokuba nini. Ngeenkqubo ezihlanganisiweyo ngokupheleleyo kunye nezisombululo zonikezelo olunye senza lula uluhlu lwempahla, ukuhanjiswa kunye nokufakwa kweendawo zempompo oluludaka kunye neendawo zokugcina izinto ukuze iinkqubo zabaxumi bethu ziqhubeke ixesha elide, zikhuselekile kwaye zisebenza ngokufanelekileyo.
I-YAAO yenza onke amalungu empompo atshintshayo alungele iWarman kunye nezinye iindawo zempompo ze-OEM.
Iinxalenye iimpompo oluludaka zinokuhlelwa ngokweendawo ezintathu eziphambili: oluludaka pump iindawo ezimanzi, iindawo ulungiselelo itywina, iindawo amalungiselelo drive, ngoko ke iindawo pump oluludaka zethu zahlulwe ngokwale ndlela yokucinga.
Isiseko sikaTobee sisiseko esidityanisiweyo esime nkqo, siyilo, ipateni yokulungiselela, ukubumba, ukuphosa, ukunyanga ubushushu, umatshini kunye nendibano. Sinokuqinisekisa umthengi ngokulunga okuthe ngqo xa iinxalenye zifakelwe kwizakhelo ezikhoyo ze-OEM kwaye ziya kusebenza ngomatshini nangasemanzini njengoko ziyilelwe yi-OEM.
I-YAAO ibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zempompo oluludaka kubandakanya impellers, iilitha zevolute, umqala ityholo, ifreyim yesakhelo sokufaka i-liner, abagxothi, iimeko zempompo, ukuthwala indibano njl.
Iinxalenye zerabha ezimanzi zinxiba kakhulu ukumelana nokumelana, zihlala zisetyenziselwa iimeko zokusebenza zeasidi. Ezifana tailing kushishino lwezemigodi, oluludaka kunye amasuntswana amancinci kwaye akukho imiphetho rough. Indawo yonke yokuhamba ibandakanya i-Cover Plate Liner, i-Throat bushing, i-Frame plate liner, i-Frame Plate Liner Insert. Izinto ezenziwe ngerabha zenziwe ngerabha yeNatrual, ikhowudi yi-R55 kunye ne-R38, ethi yona isebenze ngokugqwesileyo kubandakanya ukumelana nokunxiba, ukumelana neekhemikhali, ukungangeni manzi kunye nobushushu obuphezulu bokusebenza ukusuka -40-75.
Ubungakanani be-Rubber impeller bufana ne-High Alloy Impeller. Sinokubonelela ngerabha oluludaka Pump kunye Metal Impeller. Impeller zezona ndawo zibalulekileyo kwiCentrifugal Slurry Pump. Iimpompo zeCentrifugal zifuna ukuhanjiswa ukuze kuveliswe amandla e-centrifugal aqhubekisa iisurries. Amandla e-centrifugal aveliswa yi-impeller xa ibaleka kwisantya esithile.
Iirabha zempompo zelaphu -I-liners ezinokutshintshwa ngokulula zitshintshiwe, zingaqhotyoshelwanga, kwindawo yokuncamathisela okuqinisekileyo kunye nokulula kokugcinwa. Ii-liners zensimbi ezilukhuni zinokutshintshiselana ngokupheleleyo ngoxinzelelo lwee-elastomers ezibunjiweyo. Amakhonkco etywina ka-Elastomer abuyise onke amalungu edibeneyo.